Kuphi ukuthenga ubungqina obuphezulu be-stanozolol powder | AASraw steroid powder
/Blog/Stanozolol/Kuphi ukuthenga ubungcwele be-stanozolol powder?
ezaposwa ngomhla 10 / 28 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Stanozolol.
Stanozolol, ebizwa nangokuthi iWinstrol, enye yeyona steroids eyaziwa kakhulu, yenzelwe ukunyanga i-anemia kunye nokusetyenziswa kwezilwanyana. Kule mihla, iyasetyenziswa kakhulu kwimidlalo, ngokukodwa ukwakha umzimba. I-Winstrol ingasetyenziselwa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabasetyhini. Injongo yaso ephambili ziqhumayo Uhlobo oluqhelekileyo lwe-stanzolol kwiimarike ngokuqhelekileyo luyi-stanozolol engenayo i-oral stanozolol: stanozolol 50mg, i-stanozolol 100mg, i-stanozolol, i-stanozolol amaphilisi, i-stanozolol ipowder eluhlaza.
Yintoni stanozolol i powd?
I-Stanozolol powder yinto ebonakalayo ye-Stanozolol, yinto enobumba obumhlophe, i-CAS: 434-07-1, i-Formula ye-Molecular C21H32O3, Isisindo seMolcular: 332.48, i-Melt Point: i-172-180 ° C, iStanozolol ihlala igcinwe kwigumbi.
Izindlela ezimbini zokuthenga stanozolol powder oluhlaza: kwivenkile okanye kwi-intanethi?
Ngokuqhelekileyo, abantu banokuthenga i-steroids abayifunayo kwivenkile yasekuhlaleni, kodwa njengoko i-intanethi iqhutywe ngokukhawuleza, ukuthenga nge-intanethi kuba yindlela ephezulu yokukhetha. Namhlanje abantu abaninzi baninzi bathenga i-sterodis kwi-intanethi, ngakumbi bathenge i-powder, ipowder powder stanozolol, bathenge i-stanozolol ipowder eluhlaza kwi-intanethi, xa kuthelekiswa nesitolo sendawo, ukuthengwa kwe-stanozolol kwintengiso ku-intanethi kunamathuba amaninzi, ukuthengwa kwe-intanethi kuluhlu, kulula ukuthelekisa, ngaphantsi kweendleko ukusabalalisa kunye nezitolo, ixabiso le-stanozolol libiza kakhulu, kwaye lilungele kwaye likhawuleze.
Kuyiwaphi uthenge i-stanozolol powder eluhlaza kwi-intanethi?
Ukuba sele sele unomthengisi wakho onokwethenjelwa, oko kulungile.Ukuba kungenjalo, apha kuza ukukhetha kwakho okuhle, i-AASraw. Ikakhulukazi kumthengisi we-steroids, abo bafuna ukufumana umthombo onokuthenjelwa nokuzinzileyo wokubonelela, onokuqinisekisa ukuba uphuculo oluphezulu kunye nobungakanani bonikezelo, luncedo kakhulu ekuphuhliseni ishishini, i-AASraw yenza ukuba kwenzeke.
Yintoni i Inkampani yeAASraw?
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory kwi-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Sihambisa i-99% puirty steroid i-powder eluhlaza umgangatho ophezulu kunye nexabiso elihle lokukhuphisana, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nentlawulo ekhuselekileyo. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids ipowder eluhlaza, ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, i-hormone zesondo, i-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, i-homebrew, i-ugl.Njenge-testosterone enanthate 90USD / 100g , high quality Clen HCL, sibutramine, ect.
Stanozolol- Top selling steroids for bodybuilding !!!	Modafinil: Kukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu weModafinil powder